ဒီနှစ်​ Valentine မှာ သူ့အတွက်​၊ ကိုယ့်​အတွက်​ အဓိပ္ပာယ်​​တွေအများကြီးရှိတဲ့ လက်​​ဆောင်​​လေး​တွေ​ပေးကြမယ်​ - For Her Myanmar
February 13, 2018 by Nandar
​လက်​​ဆောင်​တစ်​ခုချင်းစီမှာ ​လေးနက်​တဲ့အဓိပ္ပာယ်​​လေး​တွေရှိ တာမို့ Valentine Day မှာ ဘာ​ပေးရင်​​ကောင်းမလဲ စဉ်းစား​နေတဲ့​ယောင်းတို့အတွ က်​ idea အလန်း​လေး​တွေ ​ပေးမယ်​​နော်​။
အရင်​ဆုံး​ပြောပြချင်​တာ​လေးက Valentine ဆိုတာနဲ့ ​တော်​​တော်​များများက​တော့ ချစ်​သူရည်းစား​တွေအတွက်​သီးသန့်​လို့ ထင်​ကြမယ်​.. ဒါ​ပေမဲ့ နန္ဒာက​တော့ Valentine’s Day ဆိုတာ ချစ်​ခင်​ရတဲ့သူ​တွေကြားက ချစ်​ခြင်း​မေတ္တာတရား​တွေကို အချင်းချင်း တန်​ဖိုးထားဂုဏ်​ပြု​ပေးဖို့ ဖြစ်​လာတဲ့ရက်​လို့ ထင်​တာပဲ။ သမီးရည်းစားအချစ်​မှ မဟုတ်​ဘူး​​ပေါ့​နော်​ .. ဆိုလိုတာက မိသားစုဝင်​တွေ၊ သူငယ်​ချင်းအ​ပေါင်းအသင်း​တွေနဲ့လည်း ​ပျော်​​ပျော်​ပါးပါး ဆင်​နွှဲလို့ရတဲ့ပွဲလို့ သတ်​မှတ်​ပြီး Date တူတူလုပ်​တာ၊ လက်​​ဆောင်​​ပေးတာမျိုး​လေး​တွေ လုပ်​​ပေးလို့ရပါတယ်​။ ဒီ​တော့ အတွဲမရှိလို့ဆိုပြီး V Day မှာ တစ်​​ယောက်​တည်း အထီးကျန်​​နေစရာ၊ အားငယ်​​နေစရာမလိုပါဘူး .. ကိုယ့်ရဲ့ ​ပတ်​ဝန်းကျင်​မှာရှိတဲ့ ကိုယ်​ချစ်​ခင်​ရတဲ့သူ​တွေကို V Day မှာ အချိန်​​ပေးပြီး သူတို့နဲ့တူတူရုပ်​ရှင်​သွားကြည့်တာမျိုး၊ စား​သောက်​ဆိုင်​ထိုင်​တာမျိုး လုပ်ကြည့်ပါ။
အလုပ်​ရှိလို့ မအားတဲ့သူ​တွေကျ​တော့လည်း message ပို့​ပေးတာတို့၊ ဖုန်း​ခေါ်တာတို့လုပ်​ပြီး ကိုယ့်စိတ်​ထဲက အ​ရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်​​တွေ​နေရာ အမြဲရှိ​နေတဲ့အ​ကြောင်းကို အသိ​ပေးနိုင်​ပါတယ်​။ ကဲ .. ဒါဆိုရင်​​တော့ လက်​​ဆောင်​​ပေးတဲ့အပိုင်းကို ပြန်​​ပြောမယ်​​နော်​။ V Day ဆိုမှ​တော့ အားလုံးက ​ချောကလက်​နဲ့ ပန်းစည်းကိုပဲ ​ပြေးမြင်​ကြမှာပဲ။ ​ချောကလက်​နဲ့ ပန်းစည်းအပြင်​ တခြားဘာ​တွေများ ​ပေးလို့ရဦးမလဲ စဉ်းစားကြည့်​ကြတာ​ပေါ့။ အဓိကက ကိုယ်​​ပေးလိုက်​တဲ့ပစ္စည်း​လေး မှာ သူ့အတွက်​၊ ကိုယ့်​အတွက်​ ဘယ်​​လောက်​ထိ ​လေးနက်​တဲ့အဓိပ္ပာယ်​​တွေရှိ​နေလဲဆိုတာ သူသိသွားဖို့ပါပဲ။
အိပ်​မက်​လှလှမက်​ပါ​စေ (တစ်​နည်းအားဖြင့်) ညစဉ်​ညတိုင်း အိပ်​မက်​ထဲမှာ ဆုံကြမယ်​ .. ကိုယ့်ကို ညတိုင်းအိပ်​မက်​မက်​ပါ ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်​နဲ့ ​ခေါင်းအုံးကို ​ပေးကြတာများပါတယ်​။ အကယ်​၍ သူက ခရီးခဏခဏသွား​နေရတဲ့သူဆိုရင်​​တော့ ခရီးသွားရင်​ လည်​ကုပ်​မှာပတ်​ပြီး အိပ်​လို့ရတဲ့ ခရီး​ဆောင်​​ခေါင်းအုံး​လှလှ​လေး​တွေ ​ပေးလို့လည်းရပါ​သေးတယ်​​နော်​။
​နည်းနည်း​လောက်​ ​ခေတ်​​နောက်​ပြန်​သွားကြည့်ကြတာ​ပေါ့။ အင်​တာနက်​​ခေတ်​ဆို​ပေမယ့် ဟိုးအရင်​တုန်းကအတိုင်း သူ့အတွက်​ ကိုယ်​တိုင်​​ရေးထားတဲ့ လက်​​ရေး​စာက သူ့စိတ်​ကို ထိခတ်​လှုပ်​ရှား​စေမှာ အ​သေအချာပါပဲ။ ပဲ​ပင်​​ပေါက်​ကို ​ထော်​လာဂျီကြိတ်​ထားသလို လက်​​ရေးနဲ့ မ​ရေးနဲ့​ပေါ့​နော်​။ အတတ်​နိုင်​ဆုံး သပ်​သပ်​ရပ်​ရပ်​ လှလှပပ​လေးနဲ့ စကားလုံး​တွေကို ထိထိမိမိ​ရေးနိုင်​ရင်​တော့ ​အ​ကောင်းဆုံးပါပဲ ​ယောင်းတို့​ရေ။
နည်းနည်း​လေး ရိုကြည့်ကြမယ်​။ ကိုယ်​တိုင်​ handmade coupon ​လေး​တွေလုပ်​ .. အ​ပေါ်မှာ ဘာခံစားခွင့်၊ညာခံစားခွင့် စိတ်​ကူးရှိတာ​လေး​တွေ​ရေးပြီး ဘူး​လေးတစ်​ဘူးထဲထည့် … နည်းနည်း​လေး ပိုလှသွား​အောင်​ ဖဲကြိုး​လေး​တွေနဲ့စည်း။ အကုန်​အကျလည်းမများဘူး .. ရိုဆန်​လိုက်​တာမှ ​ပြောမ​နေနဲ့။ Coupon ​လေး​တွေ လုပ်​ဖို့ အိုင်ဒီယာလည်း ​ပေးဦးမယ်​ .. ဥပမာ ကိုယ်​က သူ့ကို ခဏခဏ စိတ်​​ကောက်​တတ်​တယ်​ဆိုပါတော့ .. မ​ချော့ဘဲ စိတ်​​ကောက်​​ပြေခွင့်၊ စိတ်​ဆိုး​ပြေခွင့် ကတ်​​လေး​တွေ သူ့ကို​ပေးပြီး ​နောက်​ ကိုယ်​စိတ်​​ကောက်​တဲ့အခါ ခြွင်းချက်​မရှိ စိတ်​​ကောက်​​ပြေပါ့မယ်​ဆိုတာမျိုး ကတိ​ပေး .. အဲ့သလို ရို​ပေါ့​နော်​။ ဒါမှမဟုတ်​ သူက အစားချည်းပဲ တစ်​လိုင်းဆိုပါစို့.. ​ရေခဲမုန့်​ free ဆွဲခွင့်​၊ ဝက်​သားတုတ်​ထိုး အ​ချောင်း ၅၀ တီးခွင့်၊ Pizza Hut မှာ အပြတ်​ဖြုတ်​ခွင့်… ဒါမျိုး ကတ်​​လေး​တွေ​ပေးကြည့်… ​(အ​ပေးခံရတဲ့သူ​တော့ မသိဘူး .. နန္ဒာသာဆို ဝမ်းသာလွန်းလို့ မျက်​ရည်​များ​တောင်​လည်​ရှာတယ်တွေ ဖြစ်​ကုန်​မှာ)
Related Article >>> ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူမရှိတဲ့ပျိုမေတို့ကြည့်သင့်တဲ့ ရုပ်ရှင်များ
ရိုးရိုးတန်းတန်း အယ်လ်ဘမ်ထဲ ဓာတ်​ပုံ​တွေပြုံသုံထည့်ပြီး ​ပေးလိုက်​တာထက်​စာရင်​ ကိုရီးယားကား​တွေထဲကလို ဓာတ်​ပုံ​လေးကပ်​ .. ​ဘေးမှာ ဘယ်​​နေ့က ဘယ်​​နေရာမှာ အတူတူရှိခဲ့တာဆိုတာမျိုး​လေး​တွေ ​ရေးကြည့်ပါ။ ချစ်​သူစဖြစ်​တဲ့​နေ့တုန်းက ရိုက်​ထားတဲ့ပုံ​လေး​တွေရှိရင်​လည်း ထည့်ကပ်​ပြီး အရိုစာ​သား​လေး​တွေ​ရေး​ပေါ့။ သိပ်​မရိုတတ်​ဘူးဆိုရင်​လည်း မပူနဲ့ .. ကိုယ်​အကြိုက်​ဆုံး ဒါမှမဟုတ်​ သူအကြိုက်​ဆုံး သီချင်းစာသား​လေး​တွေသာ ထည့်ရေး​ပေးလိုက်​။
(၅) Memory Stick
သူနဲ့ပတ်​သက်​တဲ့ ကိုယ့်​ရဲ့ခံစားချက်​​တွေနဲ့ တိုက်​ဆိုင်​တဲ့ သီချင်း​လေး​တွေချည်း ​ရွေးထုတ်​ပြီး Stick ထဲထည့်​ .. Stick ကိုလည်း ​တွေ့ရာ​ကောက်​မဝယ်​ဘဲ လှလှပပ အမြင်​ဆန်းတာမျိုး​လေး ​ရွေးဝယ်​ပြီး ဘူးလှလှ​လေးထဲမှာ ​သေချာထုပ်​ပိုးပြီး ​ပေးလို့ရပါတယ်​​နော်​။
(၆) ဘာ​ကြောင့် ချစ်​ရသလဲ
Reasons Why I Love You ဆိုပြီး သူ့ကို ကိုယ်​ဘာ​ကြောင့် ချစ်​ရတယ်​ဆိုတဲ့ အချက်​က​လေး​တွေစု .. Handmade Card ​လေး​တွေတွဲ​ပေးတာပဲဖြစ်​ဖြစ်​၊ ဒါမှမဟုတ်​ရင်​လည်း ဖန်​ပုလင်း​လေး​ထဲမှာ ​ရောင်​စုံစက္ကူ​လေး​တွေ​ခေါက်ထည့်ပြီး စာရွက်​ထဲမှာ သူရဲ့ ဘယ်​အစိတ်​အပိုင်း​လေး​တွေကို ချစ်​တယ်​ဆိုတဲ့အ​ကြောင်း၊ ဘာ​ကြောင့်​ ချစ်​မိသွားပါတယ်​ဆိုတာမျိုးလေး ​ရေးထည့်​​ပေးလို့ရပါ​သေးတယ်​​နော်။
အနံ့ရတိုင်း ကိုယ့်ကို သတိရနေမှာပေါ့..
သူ​​​နေ့တိုင်းသုံးတဲ့ ​ရေ​မွှေးကို ကိုယ်​တိုင်​ အနံ့​သေချာ​ရွေးဝယ်​​ပေးထားရင်​ ​ရေ​မွှေးဆွတ်​တိုင်းမှာ သူ ကိုယ့်ကို သတိရမှာပဲ။ ​နောက်​ ဘယ်​ပဲသွားသွား သူနဲ့အတူ ကိုယ်​ရှိ​နေတယ်​ဆိုတဲ့ ခံစားချက်​မျိုးရ​အောင်​ ​ရေ​မွှေး​လေးက​တော့ ​ပေးကြည့်သင့်​ပါတယ်​။ သူဘယ်​လိုအနံ့မျိုး ကြိုက်​တတ်​တယ်​ဆိုတာ​တော့ ကြိုသိထားဖို့လိုတာ​ပေါ့​နော်​။
(၈) Love Kit
သူသ​ဘောကျ​လောက်​တဲ့ အသုံး​အ​ဆောင်​ပစ္စည်​​လေး​တွေအြ ပင်​ စားစရာ​လေး​တွေစုပြီး Box လှလှ​လေးတစ်​ခုထဲမှာ ထုပ်​ပိုးပြီး​ပေးလို့ရပါတယ်​။ ဥပမာ – အလှအပဝါသနာပါတဲ့ Makeup Junkie ​လေး​တွေအတွက်​ဆိုရင်​ နှုတ်​ခမ်းနီ​လေး​တွေ၊ လက်​သည်းနီဘူး​လေး​တွေစုပြီး ဘူး​လေးထဲထည့်​​ပေး​ပေါ့။ အ​သောက်​ချည်းပဲတစ်လိုင်း ကိုကို​တွေအတွက်​ဆိုရင်​လည်း သူကြိုက်​တတ်​တဲ့ brand ​လေး​တွေစုပြီး ခြင်း​တောင်း​လေးနဲ့ ထည့်​​ပေးကြည့်ပါ။ ကိုယ့်လက်​​ဆောင်​ကို သူအရမ်းသ​ဘောကျသွားမှာ အ​သေအချာပါပဲ​နော်။
အဓိကက​တော့ လက်​​ဆောင်​ဆိုတာ လက်​ခံရရှိမယ့်သူအတွက်​ ရည်​ရွယ်​ပြီး သူသ​ဘောကျပါ​စေ၊ သူ​ပျော်​ပါ​စေဆိုတဲ့ စိတ်​​စေတနာ​ကောင်းနဲ့​ပေးရင်​ကို တန်​ဖိုးအများကြီးရှိပြီးသား ဖြစ်​​နေပါပြီ။ အဲ့ဒါကိုမှ Idea ​ကောင်း​ကောင်း​လေးနဲ့ ဖန်​တီးပြီး​ပေးတဲ့လက်​​ဆောင်​မျိုးဆိုရင်​ ပိုပြီး​တော့ ​လေးနက်​တဲ့၊ အဓိပ္ပာယ်​ရှိတဲ့လက်​​ဆောင်​မျိုး ဖြစ်​သွားတာပါပဲ။
​ယောင်းတို့အားလုံး V Day မှာ ချစ်​ခင်​ရတဲ့သူ​တွေနဲ့ တန်​ဖိုးရှိတဲ့အချိန်​​တွေကို အတူဖြတ်​သန်း​ပျော်​ရွှင်​နိုင် ​ကြပါ​​စေ​နော်​။
နာမည်​က​တော့ အိမ့်​နန္ဒာကြည်​တိုးပါ။ For Her Myanmar မှာ Freelance စာ​ရေးသူတစ်​​ယောက်​အ​နေနဲ့ ကူညီအား​ဖြည့်​​ပေးထားပါတယ်​။ ဟုကဲ့ .. နန္ဒာ့ရဲ့​ဆောင်း​ပါး​လေး​တွေက​တော့ အသုပ်​စုံဆန်​​နေ​လောက်​မှာပါ။ စိတ်​ခံစားချက်​​အတိုင်း ရင်​ထဲရှိတာ​လေး​တွေလည်း ​ရေးပါတယ်​။